Tag: anotsanangura video | Martech Zone
Tag: anotsanangura video
Zvinotorwa makore gumi ekuteerera webhu dhizaini (RWD) kuenda zvakanyanya kubvira Cameron Adams paakatanga kuunza pfungwa. Pfungwa iyi yaive nehunyanzvi - sei isu tisingakwanise kugadzira masayiti anoenderana nechitarisiko cheichi chishandiso chairi kutariswa? Chii chinonzi Kugamuchira Dhizaini? Inopindura webhu dhizaini (RWD) ndeyewebhu dhizaini nzira yakanangana nekugadzira masosi kuti ape mukana wakaringana wekuona chiitiko - kuverenga kuri nyore uye kufamba nehuremu hwekushomeka,
Sangano rangu rakaburitsa kunze kwakatsanangurwa mashoma evhidhiyo mabasa evatengi vedu. Takatora mhedzisiro inoshamisa pamusoro pemakore tichiishandisa, asi mitengo yacho yasiyana zvakanyanya. Nepo vhidhiyo yekutsanangudza ingaite senge yakatwasuka kumberi, kune akawanda mafambiro ekufambisa ekuisa pamwechete anoshanda anotsanangura vhidhiyo: script - chinyorwa chinoratidza dambudziko, chinopa mhinduro, chinosiyanisa zita, uye chinomanikidza muoni kuti atore matanho.